October 21, 2020 - Achawlaymyar
October 21, 2020 by Achawlaymyar
ယောက်ျားတို့၏ အားနည်းချက် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ရှိတယ်။ မိုးမင်းတဲ့….လူက ဘိုရူးဆိုတော့ သူ့ကိုယ်သူ မိုက်ကယ်မိုး တဲ့။ သူ့ဟာသူ မိုက်ကယ်မိုးဖြစ်ဖြစ် မိုက်ကယ်ကောင်းကင်ဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းတွေ ခေါ်ကြတာက… … “တွတ်ပီ”… ပဲ။ ခေါ်မှာပေါ့… လူကြည့်တော့ အရပ်နှစ်တောင်လောက်နဲ့ ဗိုက်ပူနံပိန်လေးဟာကို။ ထားပါ…..ပြောချင်တာက သူက ဘီယာကြိုက်တယ် …KTV ကြိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့်…ခုတော့ ဘီယာပဲ သောက်တော့တယ်။ KTV က ပြတ်သွားပြီ…ဝါသနာကို စွန့်လိုက်ပြီလေ။ အကြောင်းရှိတယ်….အကြောင်းကဒီလို…. သူကေတီဗွီကြိုက်ပေမယ့်… ဒါကို သူ့မိန်းမက မကြိုက်ဘူး။ မကြိုက်လို့တားတယ်။ ဘယ်လိုတားတား မရဘူး။ မူးလာရင်ဖြစ်ဖြစ် အဖော်ကောင်းရင် ဖြစ်ဖြစ် KTV ကို ဒိုးတော့တာ။ မိန်းမ မကြိုက်မှန်းသိတော့ ပေါ်တင်တော့ မသွားဘူးပေါ့။ ယောက်ျားတို့ တတ်အပ်တဲ့ အဌာရသ ၁၈ … Read more
နဖူးစာရွာလည်……ဆိုတာ ငယ်ငယ်က ကြားဘူးတဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံပြင်လေး ပြောပြပါမယ် ။တနေ့မှာ လူပျိုပေါက်လေးတယောက်ဟာ သူ့ချစ်သူ ဘယ်လိုလူမျိုးလည်း ဆိုတာ သိချင်တာနဲ့ ဗေဒင်ဆရာကို မေးပါသတဲ့ ။ ဗေဒင်ဆရာက သူ့ကို အိုးချမ်းကွဲ တခုအပေါ်မှာ အင်းကွက်ကလေး ရေးပေးလိုက်တယ် ။ဒီအင်းကွက်ကလေးကို လက်ကကိုင်ပြီး ဖူးစာရေ ၊ ဖူးစာရေလို့ အော်ခေါ် ၊ အဲ့ဒီအခါ မင်းရဲ့ ဖူးစာဖက်က “ရှင်” လို့ ထူး လိမ့်မယ်လို့ မှာလိုက်သတဲ့ ။။ လူငယ်လေးလည်း တရွာဝင် တရွာထွက် ဖူးစာရေ ၊ ဖူးစာရေ လို့ ခေါ်ပေမဲ့ ထူးမဲ့သူမရှိတာကြောင့် စိတ်ညစ်လာပါသတဲ့ ။လက်လျော့မယ် လုပ်ပြီးမှ အားပြန်တင်းပြီး ဆက်ကြိုးစား ခေါ်ကြည့်ပါတယ် ။ ရွာတရွာရဲ့ တနေရာ … Read more
ဗိုလ်တထောင်ဘုရားရှိ မြနန်းနွယ် အဆောင်၊ ဘိုးဘိုးကြီးအဆောင် ၊ ဝိဇ္ဖာဓာတ်နန်း စသည့်နေရာအသီးသီးတွင် လုံခြုံရေး နှင့်အစစအရာရာ ကိစ္စများအတွက် ဘုရားဂေါပကအဖွဲ့မှခန့်အပ်ထားသော ဝန်ထမ်းများမှ အလှည့်ကျ တာဝန်ယူရသည်။ တစ်ရက် စာရေးသူ မြနန်းနွယ် အဆောင် သို့ရောက်ရှိစဉ် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးမှ အမတော်အားပွဲဆက်သူတစ်ဦးအတွက် ကိုယ်စားဆုတောင်းပေးနေသည်ကို မြင်မိသည်။ အများအားဖြင့် အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် အစီစဉ်တကျပြောဆို ပွဲအပ်ဆုတောင်းပေးကြပါသည်။ ထိုသူသည် သုံးလေးဦးဆက်တိုက် ပြောဆိုဆုတောင်းပေးပြီးနောက် ခတ္တခဏ စာရေးသူ အနီးရှိ ထိုင်ခုံတွင် ထိုင်၍ နားနေခိုက်တွင် စာရေးသူသိလိုသမျှကိုသွားရောက်မေးမြန်းရင်း စကားလက်ဆုံကျကာ အမတော် မြနန်းနွယ် ရဲ့ ထူးခြားဆန်းပြားဖြစ်ရပ်များနဲ့ ဆုတောင်ပြည့်ပုံများကို မှတ်သားခဲ့ရသည်။ ထိုမှတ်သားခဲ့သည်များအထဲမှ အမတော် မြနန်းနွယ် ရဲ့ပါးကို နမ်းမိ၍ အသက်မသေရုံတမယ်ဖြစ်ခဲ့ရသူတစ်ယောက်အကြောင်းကို စာဖတ်သူများ သိရှိစေရန် ရေးသားလိုက်ပါသည်။ ထိုသို့ … Read more
ကောင်လေး တွေ သဝန်တို လာရင် လုပ်တတ်တဲ့ အရာ ( ၆) ခု ယောင်္ကျားလေး တွေ သဝန်တို လာရင် မိန်းကလေး တွေလို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထုတ်မပြောပြတတ်တာကြောင့် ဘာဖြစ်မှန်း မသိဘူးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကို မိန်းကလေး ဘက်က နားမလည်ရင်တော့ ပြဿနာ ဟာ တအုံ့နွေးနွေး ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ သင့် ချစ်သူ ကောင်လေး ဒီအရာလေးတွေကို ပြုလုပ်နေပြီဆိုရင်တော့ သူ သင့်ကို သဝန်တို နေတယ်ဆိုတာ သေချာနေပါပြီ။ ၁။ စပြီး ဂရုမစိုက်တော့ဘူး ….. စကားပြောနေရင်းနဲ့ ရုတ်တရက် ဂရုမစိုက် သလို လုပ်တတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သင်ပြောတဲ့ စကားထဲမှာ ယောက်ျားလေး အကြောင်းပါလာရင် …. သူ့ဘက်က ဂရုမစိုက် သလိုပုံစံမျိုးနဲ့ … Read more
ပရဟိတမင်းသားကြီး ဦးကျော်သူ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် ကူးစက်ခံရ
ပရဟိတမင်းသားကြီး ဦးကျော်သူ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် ကူးစက်ခံရကြောင်း အောက်ပါအတိုင်း ဦးကျော်သူအကောင့်တွင် တင်ထားပါသည် တွေ့ပြီ… P တဲ့ အများအတွက် မျိုးဆက်သစ်တွေကို ဦးဆောင် ပေးဆပ်ရင်းဖြင့် ကျဆုံးခဲ့ရမှုကို ကြေနပ် ပီတိဖြစ်စွာ လက်ခံလိုက်မိပါသည်။ “ငါမရှိရင် ငါ့ထက် ရဲရဲကြီး ပေးဆပ်ရဲသူ ရောက်လာလိမ့်မယ်” “ငါမရှိရင် ငါ့ထက်သီလလုံခြုံ သစ္စာဆိုရဲသူ ရောက်လာလိမ့်မယ်” ” ငါမရှိရင် ငါတို့ချမှတ်ခဲ့တဲ့ ပရဟိတအုတ်မြစ် အဆောက်အဦးက ဒီထက်ပိုပြီး ခိုင်မာ၊မြင့်မား၊တိုးတက် လာလိမ့် မယ်” အားလုံးကို ကြိုတင်ပြင်ဆင် ထားမှုက ခေါင်းဆောင်တွေ ရဲ့ အလုပ် အေး….မင်းတို့ဖက်က ညီညွတ်ကြ ဖို့ပဲလိုတယ်။ ဒါပဲ…ကျော်သူ။ ဦးကျော်သူ အမြန်နေပြန်ကောင်းအောင် ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါအူးနော်…။ ———————– ပရဟိတမငျးသားကွီး ဦးကြျောသူ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျ ကူးစကျခံရ ပရဟိတမငျးသားကွီး … Read more
ဘာပဲစားစား ဘယ်လောက်စားစား ဝမလာတဲ့ ပျိုမေတွေ ဖတ်ဖို့ …
ဘာပဲစားစား ဘယ်လောက်စားစား ဝမလာတဲ့ ပျိုမေတွေ ဖတ်ဖို့ … တစ်ချို့တွေကတော့ လေရှူလိုက်ရင်တောင် ဝ တယ်လို့ ဆိုနေကြပေမယ့် ဝ မလာလို့ စိတ်ညစ်နေရတဲ့ ကောင်မလေးတွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ ဝ ချင်လို့ အစားတွေ စားနေပေမယ့်လည်း ဝိတ်က တက်မလာဘဲ တစ်ခါတစ်လေ ဝိတ်တောင် ထပ်ကျသွားတာကို ရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတွေကတော့ စားသလောက် မဝတဲ့ ပိန်သွယ်သွယ် ကောင်မလေးတွေပါပဲ။ ပိန်နေလို့ စိတ်ညစ်နေမယ့်အစား ဒီအချက်လေးတွေကို ပြန်လှည့်ကြည့်ပေးသင့်ပါတယ်နော်။ (1) ဘာဝတ်ဝတ် အဆင်ပြေတယ် ပိန်တဲ့သူတွေကို ကြည့်မကောင်းဘူးလို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပိန်ပိန် ဝဝ ဖက်ရှင်အမြင်ရှိရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ ကိုယ့် ခန္ဓာနဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် ပုံစံကို ဝတ်လို့ ရပါတယ်။ ဝတဲ့သူတွေထက် စာရင် ပိန်တဲ့သူတွေက ရွေးချယ်စရာ … Read more
၀ါရင့် ရုပ်ရှင်၊ ဂီတအနုပညာရှင်ကြီး ဦးရန်ပိုင်စိုး ကွယ်လွန်
၀ါရင့်ရုပ်ရှင်၊ဂီတအနုပညာရှင်ကြီး ဦးရန်ပိုင်စိုး ယနေ့ (အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်) နံနက် ၁၁ နာရီ ၁၀ မိနစ်ကကွယ်လွန်သွားကြောင်းသိရသည် ပြည်မြန်မာ ဝါကျွတ်ချိန်ခါသမယကို ရောက်ရှိလာချိန်မှာတော့ အာဝါဟဝိဝါဟဆိုတဲ့ မင်္ဂလာပွဲတွေ၊ အလှူပွဲတွေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းမှာ ခြိမ့်ခြိမ့်ညံလာနေပါပြီ။ အဲဒီတော့ မင်္ဂလာအခမ်းအနားတွေ အစီအစဉ်တွေမှာ မပါမဖြစ်တဲ့သူတွေကတော့ ဘိသိက်ဆရာတွေပါပဲ ဘိသိက်ဆရာတွေထဲမှာဆိုရင် အနုပညာနယ်မှာ နာမည် ကျော်ကြားသူ တစ်ယောက်လည်းပါဝင်တယ်။ အခုနောက်ပိုင်း ရန်ကုန်မြို့ပေါ်က မင်္ဂလာအခမ်းအနားတွေမှာဆိုရင် ဘိသိက်ဆိုတာနဲ့ အနုပညာရှင်ကြီး ဦးရန်ပိုင်စိုးက မပါမဖြစ်။ ဦးရန်ပိုင်စိုးက မြန်မာတေးသံရှင်တစ်ဦးဆိုရင် လည်းမမှားသလို သရုပ်ဆောင်နယ်ပယ်က အနုပညာရှင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးရန်ပိုင်စိုးက ဘိသိက်လောကထဲ ဘယ်လိုရောက်လာသလဲဆိုတာက အံ့သြစရာပါ။ ဦးရန်ပိုင်စိုးကတော့ ပြောတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ သူ့ရဲ့အဓိက မေဂျာက သီချင်းဆိုတာပါတဲ့။ ဒါဆိုဘိသိက်ဆရာတစ်ဦးအဖြစ် ဘယ်လိုဖြစ်တည်လာတာလဲဆိုတာကို…. … Read more
သမီးဖြစ်သူအိမ်ထောင်ပြုသွားတဲ့ အပေါ်ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ ရင်တွင်းခံစားချက်တွေကို ဖွင့်ဟလာတဲ့အဆိုတော်ချစ်ကောင်း
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ဂီတလောက မှာ အဖေရောသမီးရော ပရိတ်သတ်အချစ်ကို သိမ်းပိုက်ထား သူတွေကတော့ အဆိုတော်ချစ်ကောင်းနဲ့ အဆိုတော် အိမ့်ချစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော် လက်တလောမှာတော့ အဆိုတော်အိမ့် ချစ်က ချစ်သူနဲ့ ရွှေလက်တွဲ ကာ လက်ထပ်သွားပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ် အဆိုပါကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဖခင်ဖြစ်သူချစ် ကောင်းက မီဒီယာတစ်ခုမှာ အခုလိုဖြေခဲ့ပါတယ်။ “သမီး အိမ်ထောင်ပြုသွားတာ တစ်ခုခု ကို လက်လွှတ်လိုက်ရ သလို ခံစားရတယ်။ ဒါပေမယ့် ပျော်လဲ ပျော်ပါတယ် သမီး ကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရလို့ အဖေ တစ်ယောက် အနေနဲ့ ခံစားလိုက်ရပေမယ့် သူ့ ဘာသာ သူ ရပ်တည်နိုင်တော့မယ် ဆိုတဲ့ အတွက် ဝမ်းသာ ပေးပါတယ် ကိုယ်တွေလည်းဒီဘဝကို ဖြတ်သန်းရတာပဲပေါ့နော် လူပျို အပျိုဘဝကနေခဲ့တယ် အိမ်ထောင်တွေကျတယ် … Read more
ငါတို့အိမျလေးရဲရဲနီ ပွညျသူခဈြတဲ့ NLD ပွိုငျပှဲမှာ ပထမဆုရရှိခဲ့တဲ့ ငှဇေငျလှိုငျးတို့အိမျ
မြန်မာအိုင်ဒေါ Season-3 ပြိုင်ပွဲကနေတဆင့် ပရိသတ်အချစ်ကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ ငွေဇင်လှိုင်းကတော့ တမူးသူလေးတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ဖို့အတွက် ရန်ကုန်မှာအများဆုံးနေထိုင်လေ့ရှိပေမယ့်လည်း ရံဖန်ရံခါ မွေးရပ်မြေဇာတိမြို့လေးကိုပြန်ကာ အလွမ်းသယ်လေ့ရှိသူပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက တမူးမြို့က အိမ်လေးနဲ့ ငါတို့အိမ်လေးရဲရဲနီ ပြည်သူချစ်တဲ့ NLD ပြိုင်ပွဲကို ဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ငွေဇင်လှိုင်းကတော့ ဒီနေ့မှာ ပရိသတ်ကြီးအတွက် သတင်းကောင်းလေးကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ လတ်တလောကာလကတော့ (၂၀၂၀) ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ်ကာလလည်း ဖြစ်တာကြောင့် နိုင်ငံသားတိုင်း ကိုယ်ယုံကြည်ရာပါတီကို လွတ်လပ်စွာမဲဆွယ်ခွင့်ရှိသလို အိမ်တော်တော်များများရဲ့အရှေ့မှာလည်း ကိုယ်ယုံကြည်ရာပါတီရဲ့ အလံအသီးသီးကို စိုက်ထူထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ငွေဇင်လှိုင်းတို့မိသားစုကတော့ NLD ပါတီကို လက်ခံယုံကြည်သူတွေဖြစ်တာကြောင့် အမေစုပုံတွေ၊ NLD အလံတွေနဲ့ တစ်အိမ်လုံးကို အလှဆင်ထားခဲ့ပြီး ဒီပြိုင်ပွဲလေးကို ဝင်ပြိုင်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ငွေဇင်လှိုင်းကတော့ ဆန်ခါတင်အဆင့်မှာ ပါလာကတည်းက ဆုရရ၊ မရရ ဝမ်းသာကြည်နူးစွာမျှဝေခဲ့သူဖြစ်ပြီး မနေ့က ဖိုင်နယ်အဆင့်ရွေးချယ်ပွဲမှာတော့ … Read more
ဖုန်းနံပါတ်အပြဲလေးကိုင်ပြီး အမေဆီ ဖုန်းဆက်ချင်လို့ပါဆိုတဲ့ ကိုရင်လေးကိုကရုဏာသက်မိပါတယ်….
ဖုန်းနံပါတ်အပြဲလေးကိုင်ပြီး အမေဆီ ဖုန်းဆက်ချင်လို့ပါဆိုတဲ့ ကိုရင်လေး ” ဦးဇင်း ဖုန်းဆက်လို့ရလား ” ” ဟေ ရတာပေါ့ဘုရား ကိုရင်က ဘယ်သူဆီများဆက်မလို့လဲ” အေမ့ဆီကိုပါ ” ” ဖုန်းနံပါတ်ကော ပါရဲ့လား ” ” ပါပါတယ်ဘုရား ”လက်ထဲကြည့်လိုက်တော့ နှစ်ပိုင်းပြတ်နေတဲ့ကတ္ထူစာရွက်လေး။” ဟာ ကိုရင် ဘယ်လိုများ နှစ်ပိုင်းပြတ်နေရတာတုန်း” ပျောက်မှာစိုးလို့ သင်းပိုင်ထဲလိတ်ထားတာပြဲသွားတာဘုရား ”သြော် ကိုရင်ရယ် အမေ့ကို ဆက်သွယ်ရမယ့် ဖုန်းနံပါတ်လေးကို ပျောက်မှာစိုးသတဲ့ ” ဒါဆို ကိုရင်က တစ်လုံးချင်းပြော ဦးဇင်းကနိုပ်ပြီး ဆက်ပေးမယ် ” ” မှန်ပါ့ 09………”.သူပြောသလို နိုပ်ပြီး ခေါ်လိုက်တာ ဖုန်းစင်တာကတပ်စင်ထားခြင်း မရှိကြောင်း တုန့်ပြန်ပြောပါတယ်…” ဟ ကိုရင် တပ်ဆင်မထားဘူးတဲ့ နောက်တစ်လုံးရှိသေးလား ” … Read more